MSF oo ku baaqdey in la ixtiraamo dhexdhexaadnimada goobaha caafimaadka - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
10.05.2010 | Gobolka Shabeelaha Hoose, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya, War-Saxaafadeed
Nayroobi – 5tii Maajo 2010ka ayaa muran shakhiyeed uu u xuubsiibtey iskudhac rabshad wata oo ka dhacay degaanka ku hareereysan xarunta caafimaadka ee Xaawo Cabdi ee ku taalla Soomaaliya. Arrintan ayaa dhalisey in la qabsado dhismihii xarunta caafimaadka. Kooxda hubeysan ayaa weli ku sugan qaybo ka mid ah xerada xarunta caafimaadka waxaana weli la hayaa tiro ka mid ah shaqaalaha Médecins Sans Frontières (MSF). MSF ayaa ku khasbanaatey in ay soo saarto bukaannadeedii ayna laasho hawlaheedii, iyada taasna dhalisey in kumanaan Soomaali ah oo ku nool waddada Afgooye aaney heli karin daryeel caafimaad.
“Sababta keeneysey in aan ka shaqeyno Soomaaliya 19kii sano ee la soo dhaafey waa annaga oo aan midkoodna la safan dhinacyada iska soo horjeeda,” ayaa uu yiri Madaxa Ergada David Querol, “Waxaa innaga go’an in aan caawinno dadka Soomaaliyeed, laakiin waxa aan sidaa sameyn karnaa oo keliya haddii la ixtiraamo dhismayaasha caafimaadka ee aan ka shaqeyno iyo shaqaalaheenna.”
MSF waxa ay si weyn uga xumaatey labada qof ee la xaqiijiyey in ay shilkaan ku dhinteen, oo uu ka mid ahaa mid shaqaalaheeda ka mid ah, oo ilaaliye ka ahaa xarunta caafimaadka.
Ururku waxa si degdeg ah ugu baaqayaa in la sii daayo shaqaalihiisa iyo in si buuxda loo ixtiraamo dhexdhexaadnimada tas-hiilaadka iyo shaqaalaha caafimaadka. Waa in dhaqso loo banneeyaa Xarunta Xaawo Cabdi si looga sii wado hawlihii caafimaad ee nolosha lagu badbaadinayey.
MSF in Afgooye
MSF waxa ay waddada Afgooye ka shaqeyneysey ilaa 2007dii. Degaanka Xaawo Cabdi, waxa ay MSF ku leedahay waax bukaan-socod, waax bukaan-jiifka carruurta ah, xarun daweynta daacuunka iyo shubanka ah, barnaamij nafaqeynta ah, iyo biyo-dhaamin waxaana ay qaybisaa bustayaal iyo agabka kale oo aan cuntada ahayn. Magaalada Afgooye waxa ay MSF ku leedahay waax bukaan-jiifka ah iyo sidoo kale barnaamij quudinta bukaan-socodka ah waxaana ay taagteertaa hawlaha cusbitaalka iyada oo bixisa daawooyin iyo qalab caafimaad, iyo sidoo kale iyada oo bixisa lacag dhiirigelin ah oo la siiyo shaqaalaha. Sanadkii 2009ki, ayaa in ka badan 162,000 qof ay la-talin caafimaad iyo daaweyn lacag la’aan ah ku heleen tas-hiilaadkan. In ka badan 14,000 oo carruur ay nafaqo-xumo hayso ah ayaa la daweeyey waxaana in ka badan 31,000 oo carruur ah laga tallaaley cudurka jadeecada.
MSF waxa ay Soomaaliya ka shaqeyneysey ilaa 1991kii waxaana ay hadda daryeel caafimaad oo lacag la’aan ah ka bixisaa gobollada Banaadir, Baay, Hiiraan, Jubbada Hoose, Shebeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Mudug. In ka badan 1,300 oo shaqaale Soomaali ah oo ay taageerayaan ku dhowaad 100 shaqaale ah oo Nayroobi ku sugan ayaa daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, daaweynta nafaqo-xumada, daryeel caafimaad iyo taageero siiya dadka barokacay, iyo sidoo kale qalliin, biyo-dhaamin iyo qaybinta sahayda gargaarka.
Tags: Afgooye, baaq, daryeel caafimaad, dhex-dhexaad, isbitaal